नेकपा बैठकमा आज के भयो ? | नेकपा बैठकमा आज के भयो ? – हिपमत
सरकारले गरेका कामले अहिले जनतामा पूरै हाई-हाई छ । पार्टीप्रति देशव्यापी लहर बढेको छ । तर,सरकारले गरेका राम्रा कामलाई पार्टीकै नेताले राम्रो नदेख्ने, राम्रो नभन्ने…!’